Kabary fisaorana (serasera.org) - Takila Malagasy
Kabary fisaorana (serasera.org) (Vetsomena)
Nitsidika : 32939
Kabary fisaorana ho an'ny serasera.org
Ny tonga tsy miarahaba tokoa hono naman'ny tezitra ary ny lasa tsy manao veloma naman'ny sosotra ka izany indrindra no hiarabako anareo izay tonga manatrika eto anio. Ka ny arahaba atolotro ho anareo dia ataoko toy ilay masoandro be lohataona ka hahenika ny isam-baravarana sy isan-tokonana, ataoko toy ny rivotra mifofofofo ka ny lehibe voakasikasika, ny kely voakitikitika koa arahaba manembana tompokolahy, arahaba manembana tompokovavy.
Izay tokoa ary no ela izay ela tsy nolalovam-potsiny fa entina hitaritana ny votoatin-d resaka. Fa sambatra raha samy sambatra hono ny rovan'ambohimanga fa mahatsinjo ny lavitra ary mahatazana ny akaiky. Tretrika raha samy tretrika ny alan'Angavokely, fa isidintsidinan'ny vorona ka honenany mandrakizay. Ary finaritra raha samy qaha hono tsimbazaza fa nahavoasarika vahiny tamin'ny antsoantson-dragidro. Fa ny eto amintsika kosa lahy, dia sambatra sy tretrika ary finaritra noho ny fisian'ity serasera Malagasy ity. Koa dia amin'ny anaran'ny Malagasy iray manontolo no isoloko tena ho fisaorana anao ry "Eugène Heriniaina". Raha tsy teo tokoa mantsy ianao mety tsy vita toy izao ity takelam-pifandraisana Malagasy ity, ka hoy izahay Aminao hoe " misaotra, misaotra, misaotra" . Efa maro toloa izay ny ezaka vitanao na tamin'ity takelaka ity na tamin'ny resaka " application ". Koa mirary soa anao hatrany ary izahay Malagasy rehetra mba hotahian'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ataonao ka hotsimbininy hatrany. Ary ho feno fahasalama, hery sy tanjaka hafahanao mbola manohy ny asanao.
Izay tokoa ary no ela, fa raha lava ny saha, very ny kisoa. Raha lava Rakoto, tsy hita Rasoa ary raha lava ny teny, mahamolamolaina. Koa hamaranako ny teniko ary dia ny firarian-tsoa ho antsika rehetra mba ho velon'aina sy salama hatrany. Ary manentana antsika izay mbola tsy ao anatin'ny serasera. Org ihany koa mba hiditra amin'ozany ary hanandratra ny Maha-Malagasy antsika.
Misaotra tompokolahy, misaotra tompokovavy